Gaa na Lakes nke Panama, ihe ngosi ya | Akụkọ Njem
Monica sanchez | | America, Ebe njegharị, General
Ọdọ mmiri ndị ahụ bụ ihe ịtụnanya a ga-echekwa ka ọtụtụ n’ime anyị nwee ike ịga leta ha. N'ihe banyere ndị ị ga-ahụ na Panama, ha dị egwu n'ezie, n'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime ha bụ aka aka. Ma ha jupụtara na ahịhịa na ahịhịa na-ekpo ọkụ nke na-eme ka ị nwee mmetụta n'ụlọ ... ma ọ bụ ọbụna ka mma, ebe ọ bụ ikuku dị ọcha na okike n'onwe ya nwere ike inyere gị aka ịmara onwe gị nke ọma.
Ọ ga-amasị gị ịgagharị na ọdọ mmiri Panama? Echegbula, maka oge ahụ ị gaghị ahapụ ụlọ gị, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ na ịchọrọ ịzụta tiketi ụgbọ elu mgbe ị hụrụ ha niile.
2 Ọdọ mmiri Gatun
3 Ọdọ mmiri Alajuela
5 Ọdọ Miraflores
6 Ihu Igwe Panama
7 Ihe ị kwesịrị ịma tupu ịga Panama
7.1 Ọ dị mma?
7.2 You kwesịrị ịgba ọgwụ mgbochi?
7.3 Kedu ego ha na-eji?
8 Ihe na-agaghị efu na akpa akpa gị
Anyị ga-amalite ụzọ anyị ileta ndị Chiriquí lagoon, nke bu otu ihe nlegharị anya nke obodo. Ejikọtara ọdọ mmiri a na agwaetiti Bocas del Toro, nke dị na nsọtụ Ndịda Ọwụwa Anyanwụ nke Costa Rica, ma kewaa ya na Chiriquí lagoon nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na ọdọ mmiri Almirante n'akụkụ ọdịda anyanwụ. Ikike n'etiti ha abụọ anyị ga-ahụ peninshula, agwaetiti Popa na Cayo de Agua.
Ọdọ mmiri Gatun
Anyị na-aga n'ihu njem anyị na-atụgharị uche na Ọdọ mmiri Gatun. Nke a bụ ọdọ mmiri dị na Panama Canal nke emere n'etiti 1907 na 1913 n'ihi iwu nke Gatún Dam, na Osimiri Chagres. N'oge ahụ ọ bụ ọdọ mmiri ọdọ mmiri kachasị ukwuu n'ụwa, ma ugbu a nwere mpaghara nke 435km2, na-eguzo na 26m n'elu ọkwa mmiri.
Ọdọ mmiri Alajuela
Na-enweghị ebe ịga ebe dị anya, anyị hụrụ ọdụ mmiri ọdọ mmiri ndị ọzọ: nke Alajuela, nke sitere na aha ya nke otu mpaghara mba Republic of Costa Rica. Emekwara ya n’elu Osimiri Chagres, site na Madden Dam.
Ọ bụrụ na ị chere na ị hụla ya niile, eziokwu ahụ bụ Osimiri San Carlos ọ ga-agbagha nkwenye gị. Na mpaghara nke hectare abụọ, osisi flora na-ekpo gburugburu na-agba ya gburugburu Egwu. Kedu ihe ọzọ, ejiri m n'aka na ọ bụrụ na ị rọrọ nrọ nke oke ọhịa na-amaghị nwoke, mgbe ị gara ebe a ị ga-amata na nrọ ahụ emezuola.
Anyị na-emecha njem anyị site na ịga Lake Lake Miraflores, nke bụ ọdọ mmiri na-arụ ọrụ na Osimiri Panama, Ma ọ dị naanị nkeji iri na ise site na isi obodo! Ọ bụ akụkụ nke Ogige Ntụrụndụ Camino de Cruces, ọ dịkwa mkpa maka obodo San Felipe, Curundú, Ancón, n'etiti ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ mmiri na-agba mmiri na Miraflores na-eburu mmiri dị ezigbo mkpa ebe ndị a.
Ihu Igwe Panama
Ọ na-adị gị ka ịga ebe ahụ? Ọ bụrụ otu a, eleghị anya ị ga-achọ ịmata ihu igwe na Panama, ọ bụ eziokwu? Ebe ọ bụ na ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ebe ndị a dị egwu ọ dị mkpa ịkwakọ uwe kwesịrị ekwesị.
Nakwa. Panama bụ mba na-edekọba oku ekpomoku kwa afọ. Ugbu a, ị kwesịrị ịma na e nwere mpaghara abụọ: otu nke na-adịkarị ebe okpomọkụ, na nkezi okpomọkụ gburugburu 22 temperaturesC na ebe mmiri ozuzo bara ụba, dịka na Chiriquí dịka ọmụmaatụ; na onye ozo nwere ihu igwe di otutu ebe oyi di otutu, ebe obu na onodu oku di 18ºC na, n'ime onodu oyi kachasi, o nwere ike ịdaba na -3ºC, dika mpaghara di elu.
Yabụ, ịga ebe a ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ị were uwe oge ọkọchị, mana echefughị ​​jaket, ọ bụrụ na ị gaghị echefu ya. Oh, na n'ụzọ, echefula akwa mmiri ozuzo.
Ihe ị kwesịrị ịma tupu ịga Panama
Chọrọ ịmatakwu banyere Panama? Miss gaghị agbaghara a zuru ezu nke ihe m ga-agwa gị n'okpuru:
Nke a bụ obodo dị jụụ na nke zuru oke. N'ezie, ọ bịawo na ndepụta nke Mba 5 na-eme ihe ike Site na kọntinent America. N’ihi ya, ọ nweghị ihe ga-echegbu onwe gị.
You kwesịrị ịgba ọgwụ mgbochi?
Achọghị ya, mana ọ bụ ihe amamihe dị na ịgba gị ọgwụ mgbochi ahụ ọkụ. Ọ bụrụ na ịchọọghị agịga nke ukwuu, ị nwere ike ịhọrọ ịkpọrọ ọgwụ anwụnta.
Kedu ego ha na-eji?
Ego mpaghara bụ US dollar, ya mere a na-atụ aro ịgbanwe euro maka dollar tupu njem.
Ihe na-agaghị efu na akpa akpa gị
Mgbe ọ bụla anyị gara ebe ọhụụ, anyị na-enwe nnukwu obi abụọ gbasara ihe anyị ga-ebu ma ọ bụ na anyị agaghị ebu n’akpa ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa, lee ihe ị na-agaghị ahapụ n’ụlọ:
Igwefoto foto: iji jide ọdịdị ala kachasị mma ma chekwaa oge kachasị mma.
Paspọtụ na visa: E wezụga ha, anyị enweghị ike ịga Panama.
Ihuenyo: iji sunbathe n'enweghị nchegbu banyere ihe ọ bụla.
Akwụkwọ, magazin, gbanye ọkụ: Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgụ ihe, egbula oge iji akwụkwọ gị.
Ama: nọọrọ ndị kachasị amasị gị mgbe ị na-enwe ezumike gị.
Kporie ndụ na ọdọ mmiri Panama 🙂.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Osimiri Panama
Ọdọ bụ ihe kacha mkpa n’ihi na ọ dị na Panama
Oge a anyị ga-ezute ọdọ mmiri kachasị mkpa na Panama. Ka anyị bido njem a na Gatún Lake, ọdọ mmiri a na-arụ ọrụ dị ka ụzọ maka ụgbọ mmiri gafere Ọwa Mmiri Panama. E kere ọdọ ahụ n’afọ 1913, nweekwa ebe narị kilomita abụọ na iri anọ na ise.
N'akụkụ ya, Ọdọ Mmiri Alhajuela bụ ọdọ mmiri ọzọ, nke na-anọ n'Osimiri Chagres, ma nwee njikọ na Ọwa Panama. Ọdọ Alhajuela bụ ebe a na-edeba ọwa mmiri.
Ise atụmatụ ịnụ ụtọ okpomọkụ na Ista (II)
Kasị mma nke Costa Brava: Cala Corbs